ကျနော်တို့ရဲ့ကုန်သည်များစွာအကြောင်းကိုသိပါတယ်. အထူးသဖြင့် သူတို့ဟာ ရိုဘော့နှင့်ထရိတ်သူတွေဖြစ်ပြီး stop-level တစ်ခုပယ်ဖျက်ခြင်းအကြောင်းကို စိတ်ကူးထားသူတွေဖြစ်ပါတယ်. ဒီနေ့ပဲ စတင်လိုက်ပါ, သင် သို့မဟုတ် သင့်ရဲ့ရိုဘော့ဟာ ဆိုင်းငံ့အော်ဒါတွေကို သက်သာစွာပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်. FBS မှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံပါ, အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ပြီးအမြတ်ငွေတွေရယူပါ!
FBSတွင် ကုန်သည်တိုင်းအတွက် မိမိတို့ နည်းဗျူဟာအလိုက် နှစ်သက်ရာ ရွေးချယ်နိုင်စေဖို့အတွက် အကောင့်အမျိုးအစား ၆မျိုးကို စီစဉ်ပေးထားပါသည်။အနည်းဆုံးရင်းနှီးငွေ ၁$ဖြင့်စတင်နိုင်မည့် ဆင့်အကောင့်မှ အစပြုပြီး - spreadအနည်းဆုံးနှင့် အမြန်ဆန်ဆုံးအရောင်းအ၀ယ်လုပ်နိုင်မည့် အကောင့်အမျိုးအစားသစ် ECNအကောင့်အထိ အမျိုးအစား စုံလင်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။FBS၏ အကောင့်အမျိုးအစားအားလုံးကို သေချာစွာ စုံစမ်းကြည့်ရှူလိုက်ပါ။ ပုံသေ spreadအကောင့်၊ spreadမယူသောအကောင့်တို့ရှိပြီး အဆုံးမဲ့တဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေလဲ များစွာစီစဉ်ပေးထားပါသည်။!
FBSသည် ဖောက်သည်များကိုတကယ့်ကိုဂရုစိုက်သည့် အကျိုးတော်ဆောင်ကုမ္ပဏီကောင်းတစ်ခုအဖြစ် နာမည်ကျော် လူသိများပါသည်။ထိုကဲ့သိုအသိအမှတ်ပြုခံရသည့်အတွက် လွန်စွာမှ ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ရပြီး ထိုနာမည်ကောင်းကို ရေရှည်ဆက်လက်တည်တံ့နိုင်စေရန် အတွက် အမြတ်ရရှိပြီး၊ အဆင်ပြေစိတ်ကျေနပ်မှုရရှိစေမည့် အရောင်းအ၀ယ် စည်းကမ်းချက်များကို အစွမ်းကုန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည် ဖြစါပါသည်။.
ဒီနေ့ပဲ FBS ရဲ့စည်းကမ်းချက်အသစ်တွေနဲ့ စမ်းပြီး အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ! FBS နဲ့ အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ရတာ ဒီနေ့လောက်ရိုးရှင်းပြီး အဆင်ပြေလွယ်ကူတာမျိုး ဘယ်တုန်းကမှ မရှိခဲ့ပါဘူး.
ဒီအပြောင်းအလဲများမှာ (FOREX and Metals) မှာရှိတဲ့ အရောင်းအ၀ယ်နည်းလမ်း အားလုံးနီးပါးကို လက်တွေ့အသုံးချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်. အသေးစိတ်သိရှိဖို့ အကူအညီပေးရေး အဖွဲ့ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းဖို့ အချိန်ဆွဲမနေပါနဲ့.